Indwangu isisitho selanga endlini is kabanzi izimboni eziningi: ukwenziwa ematendeni, zokukhosela esikhethekile ikhava imoto. Kuyinto okuhlala, okuhlala, amelana ukugqoka, lantambama waterproof. Incazelo enemininingwane zendaba engenhla, bheka ngezansi.
Incazelo emfushane indwangu isisitho selanga endlini
Lokhu kwaziswa kuyinto indwangu PVC okuyinto afuthwe ngesibulali-polymer akhethekile camera nhlangothi zombili ukuvenisha. Phakathi abathengi abaningi ngaphezu kwezinto ezibonakalayo.-kuthandwa kakhulu.
Indwangu isisitho selanga endlini wenza kusukela nezindwangu zokwenziwa, okuncike polyvinyl chloride.
Kufanele kuqashelwe ukuthi PVC izinto kukhona high, zingabantu okunokwethenjelwa futhi iqine. Phela, ugibele, amachibi noma ikhava isisitho selanga ukuthi zenziwa wabo, yebo, kumele uhlangabezane izindinganiso eziphakeme nezimfuneko mayelana nokuphepha.
Imininingwane engenhla isetshenziswa ukumboza izinto ngokuyisisekelo ukuthatha umsebenzi ngaphezulu. Futhi, ke livame ukusetshenziswa kwezimo ezingezinhle. Isisitho selanga endlini Indwangu anganikeza ukumelana eyizingqabavu ngendalo ezifana imvula, iqhwa noma isichotho.
Izakhiwo isisitho selanga endlini Indwangu
Imininingwane engenhla ine izici ezilandelayo kunenzuzo:
It has eliphezulu kakhulu amandla ukuma;
It has sezingeni eliphezulu izinyembezi Inkomba kahle.
Okungukuthi, isisitho selanga endlini Indwangu - okuhlala, okuthembekile ukusebenza, libhekene okusezingeni eliphezulu bafake ukumelana. Nenkanuko edlulele ukuma maqondana ifomu icindezelwa bebheke Jerk uma iqhathaniswa nezinye izinto (isib ngendwangu noma ezinye Indwangu kulesi sigaba) lendwangu isisitho selanga endlini kuyinto makhulu kakhulu. Lesi sibalo Ochwepheshe bathi, kubalulekile inqubo yokufaka impahla, kanye ngesikhathi emsebenzini wayo.
Ngenxa enamathela plastic (polyvinyl chloride) isisitho selanga endlini Indwangu has repellency amanzi okuhle. It is zihlukaniswa ukumelana abezindaba nolaka. Futhi isisitho selanga endlini Indwangu alupholi elangeni isikhathi eside.
Abacwaningi baphawule ukuthi zendaba engenhla akuyona ngaphansi ukusonteka uma ebukhali lokushisa iconsi.
Indwangu isisitho selanga endlini uthambile, zazivuma, kahle insaliwe. Kulula dangle isikhathi eside azigcina isakhiwo yayo.
Futhi isisitho selanga endlini Indwangu has esinye isici esiyingqayizivele: singaphansi Welding ezishisayo. Ochwepheshe uqaphele ukuthi weld sekuyisikhathi eside zigcinwe ukuqina zalo ezinhle. Ngakho-ke, indaba ngokuvamile esetshenziselwa ukwakhiwa hangars nezinye izakhiwo prefabricated.
Indwangu isisitho selanga endlini "Oxford": incazelo
Lolu hlobo impahla kabanzi lisetshenziswe ezokuvakasha. Kuyinto ngokuyisisekelo jikelele yetende okungase kube ashiselwe glue, electrocution noma umoya oshisayo. It is afuthwe ngesibulali acrylic akhethekile Teflon esinemthombo. Kwakamuva ukuqinisekisa isisitho selanga endlini Indwangu "Oxford" ukumelana lantambama, ukungcola, ukuthola ezimanzi. Ngenxa impregnations oshiwo ngenhla yalesi material ngokuphelele kulondoloza izici zayo engaphezu kwengu-20.
Lena kahle eliphezulu izinga bafake ukumelana impahla okuyinto ngemali ephansi inikeza okusezingeni eliphezulu yokusebenza ukusebenza. Polyurethane enamathela ukunika lolu daba ngisho Ukuvikelwa aphakeme kusukela nezimvula ezinkulu, amanzi hhayi ogeleza ngaphakathi.
Of a awnings impahla esenzelwe amathilomu ongaphandle, izimoto, emadanyini okubhukuda, izikebhe kanye yezikebhe.
Indwangu isisitho selanga endlini "ngoseyili": incazelo
impahla wathi wenziwe a ngokwanele aminyene polypropylene anezikhala. Itende Indwangu yalolu hlobo is laminated nhlangothi zombili ifilimu elinendawo ukumelana UV ukukhanya namanzi.
Indwangu isisitho selanga endlini "ngoseyili" atholakala kakhulu ukusetshenziswa kwayo, ngenxa kalula futhi amandla kwezokuvakasha. Kusukela ngokushesha futhi ngaphandle kwezinkinga, ungakwazi ukwakha lokusibekela imoto noma indawo yokukhosela emvuleni.
Indwangu isisitho selanga endlini yalolu hlobo is ngokuphepha Ithungelwe luqiniswe ngentambo onensika kusukela polymer. Lokhu kwaziswa livame ukusetshenziswa ukwakhiwa ezinoqwembe for izikebhe njengoba ukubavikela kusukela imimoya enamandla.
Lapho kuphumeleleka khona le ndaba engenhla?
Ukukhiqizwa isisitho selanga endlini Indwangu wenziwa ngoba izithombe ngokuvumelana emikhakheni ehlukene:
ngoba amaloli (lorries);
oseyili ukuze trailer namaloli amancane;
lokusibekela amahholo, amahholo embukisweni, izinqolobane;
ukwenziwa amakhethini capes;
womshini amatende, awnings, amatende, awnings.
Indwangu isisitho selanga endlini kuyinto isixazululo kakhulu ngokuya ukwakhiwa kwanoma yiluphi uhlobo zokukhosela kanye nezigqoko. Ukuvikelwa Esingawethemba izimoto, yezikebhe, izikebhe, amachibi kusukela uma isimo sezulu sisibi kuqinisekisiwe.
Ukushisa Inkinga: HDD lokushisa